Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Jonjo Shelvey Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Eagle-Eyed Footballer kasị mara aha na aha njirimara; Mmmmmmmmmmmm. Anyị Jonjo Shelvey Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Lifebogger's Jonjo Shelvey akụkọ gbasara nyocha akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara eziokwu ahụ ọ nwere "Alopecia Totalis" (otu ọnọdụ na-ahapụ ya kpamkpam isi) mana ole na ole na-ele Jonjo Shelvey's Biography nke na-akpali mmasị. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Jonjo Shelvey Nwatakịrị Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Jonjo Shelvey mụrụ na 27th nke February 1992 na Romford, United Kingdom. Amuru ya nne ya, Donna Shelvey na nna, Ricky Shelvey. Jonjo nwere akụkụ nke mgbọrọgwụ ya si Scotland.
O tolitere na kansụl kansụl na Harold Hill nke siri ike ma ọ ka dị ugbu a. N'oge ahụ, nne na nna ya biri na obere kansụl, na-esote ụlọ ahịa ndị dị n'akụkụ ụzọ, na enwere nsogbu mgbe niile, a na-adụ ndị mmadụ mma.
Dị ka Jonjo si tinye ya,…“Otu ụbọchị ekeresimesi mụ na nna m nọ n’ ụlọ ebe a na-ere mmanya, elegharịrị m anya ma nwee mgbọ na igwe onyonyo. M kwuru, sị: 'Ànyị nwere ike ịga, papa? Biko achọrọ m ịhapụ mpaghara a '
Isi ihe ọzọ edeturu na ndu nwata nke Shelvey bu ihe kpatara oria aru ya na otu o siri bia. Eziokwu bụ na nchara nchacha Shelvey abịaghị pụta ụwa. Ọ bụ n'ihi ihe ọghọm ọnwa ole na ole mgbe amụrụ ya.
A hapụrụ Shelvey n'enweghị onye na-elekọta ya dị ka nwatakịrị nke mere ka ọ gbaga n'akụkụ steepụ ahụ wee daa. Nke a kpatara nsogbu nwatakịrị na okpokoro isi nke mere ka alopecia na ntutu isi ya.
Mgbe a gwọchara ya, ndị dọkịta nyere ndị mụrụ ya ude iji tinye ya n’isi. Agwara ndị mụrụ ya ka ha dinara ya na okpu ajị anụ maka otu ọnwa iji lụso isi nkwọcha ahụ.
O di nwute, oge gafere ma adighi agwo ogwu. Ndị mụrụ ya kwere ka obere Shelvey hapụ ọgwụgwọ ya n'ihi ahụ erughị ala ọ kpatara ya. Nke a site na itinye aka kpatara nkwọcha na-adịgide adịgide.
N'okwu Jonjo… ”Adaara m n’ ụlọ steepụ mgbe m bụ nwa ma kụwaa okpokoro isi m na echere m na nke ahụ mere ka ọ ka njọ. Echere m na m na-ekwusi ike mgbe niile dị ka nwatakịrị, na alopecia enweghị ike ịnweta ọgwụgwọ nkịtị mgbe enwere nrụgide.
Agbalịrị m ihe [iji gwọọ ya] mgbe m dị obere mana ọ nweghị onye na -arụrụ m ọrụ. Agbalịrị m ude a nke ị na -ete n'isi gị, m wee hie ụra na okpu ajị anụ ruo ọnwa atọ.
Erutere m ihe dị ka ụbọchị nke anọ na ọ na -amịkpọ. Ewepụrụ m okpu ahụ wee chee, sị: 'Ọ bụrụ na ị nweghị mmasị na Baldness m, gwala m okwu.
Ụjọ: “Mgbe mụ na Arsenal nọ [dị ka onye dị afọ itoolu], m na-eji okpu bekee aga ọzụzụ, n’ihi na ụjọ na-atụ m maka ihe ndị mmadụ na-eche mgbe m na-etolite.
Echetere m na mụ na nwanne m nwanyị gafere Romford, enwekwara m isi nkwọcha m, ndị mmadụ ga na -elekwa anya. Nwanne m nwanyị ga -ewe iwe maka ya wee jụọ ndị mmadụ ihe ha na -ele.
Ugbu a, abịarutela m na anaghị m echegbu onwe m ịkpụcha ya ụbọchị ụfọdụ. Ọ bụ otu a ka m dị, echere m. ”
Shelvey kemgbe ọ mere ka ọ bụrụ football na-aga n'ihu na-akwado ndị na-eto eto na-ekerịta ọnọdụ ya.
Jonjo Shelvey akụkọ ndụ eziokwu - Nchịkọta Ọrụ:
Mgbe ọ hụrụ ka nwanne ya nwoke nke okenye dara n'ọrụ ya n'ihi ndụ ọjọọ ya, a kpaliri Jonjo ịmalite ọrụ ntorobịa ya. Ọ malitere na 2001/2002 na Arsenal.
Nke a bụ otu afọ Steven Gerrard batara na ebe ahụ. Jonjo na -eto eto mere ngwa ngwa mee ya arụsị nwata ya na onye ọ ga -ele anya ụdị egwuregwu ya.
A hụrụ Shelvey dị ka nwatakịrị nwere ahụmahụ karịrị afọ ya. Ọ dabara n'ihe omume 16 na ụbọchị 59 mgbe ọ ghọrọ nwata na mgbe niile na Charlton Athletic.
Onye amụrụ ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama okpon ke otu n̄kponn̄kan eyenete emi enyenede mbuọtidem, ama ọtọn̄ọ akpa utịtmbuba 54 mbemiso usen emana esie. Nke a dugara Liverpool na-akpọ maka ọrụ ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Nwunye Jonjo Shelvey, Daisy Evans - Onye Akụkọ ịhụnanya:
Nwanyị mara mma ma dị ebube na-agbakwunye bọọlụ ugo nke Jonjo Shelvey. Ọ dịghị onye ọzọ karịa onye ọbụ abụ Britain, Daisy Evans bụ onye 3 afọ karịa ya (a mụrụ na 30th nke November 1989).
Na June 2015, Shelvey lụrụ enyi nwanyị nwere ogologo oge Daisy Evans Daisy, the ama S Club 8 kpakpando.
Comedian Jimmy Carr, onye omekorita nke Bekee, onye ngosi, onye edemede, na onye na-eme ihe nkiri nke nwere ma ụmụ amaala Britain na Irish rụrụ n’ememe agbamakwụkwọ ya. N'ezie, ọ daghị mba.
Ọ dị mkpa ịmara na di na nwunye ahụ nwere nwa nwanyị (nke dị n'okpuru ebe a) onye a mụrụ otu afọ tupu alụmdi na nwunye ha.
Jonjo Shelvey Bio - Binye akwụkwọ ozi:
Mgbe alụmdi na nwunye ya gasịrị, Onye na-egwu egwuregwu nke midfield na-eme ka iku anya ya pụta mgbe ọ na-edepụta mgbasa ozi n'ịntanetị na-achọ onye na-elekọta onwe ya iji lekọta ya, nwunye ya na nwa ya na-akwụ ụgwọ ego kwa afọ 65,000. N'okpuru ebe a bụ foto nke mgbasa ozi.
O kwuru na ibu ọrụ ezinụlọ ya na nri ọhụrụ ga -emezi ka ọ bụrụ ọkaibe.
Agbanyeghị, onye anamachọ ihe ịga nke ọma ga -enwerịrị ụgwọ ọnwa ya, na -esi nri maka Shelvey, nwunye ya Daisy na nwa nwanyị Lola Fluer na -agbanwe agbanwe na usoro nhazi Swans.
Ndị mgbasa ozi na-agụ, sị: “Na -arụ ọrụ na rota karịa ụbọchị asaa, ị ga -enwerịrị nnukwu akwụkwọ nri dị iche iche.
Dịka onye siri nri nkeonwe, ị ga-achọkwa ahụmịhe na ihe ọmụma banyere nri egwuregwu, ahụike, nri dị elu, nri egwuregwu na nri kwesịrị ekwesị iji nye nri dị iche iche.
Ga-enwerịrị ụfọdụ ahụmịhe nzuzo nke gara aga. Onye anamachọ ihe ịga nke ọma ga-arụrịrịrị ọrụ maka ego ha n'agbanyeghị, yana ndị na-achọ ọrụ ga-anọ na ọrụ Monday ruo Sọnde ma bụrụ mgbanwe na Jonusoro ihe ndozi jo na Swansea. ”
Shelvey kwenyere ihe kpatara eji ego nri iji nyere kpakpando Premier League na ezinụlọ ya aka.
N'okwu ya ...'M na-arụ ọrụ na onye na-enye ọzụzụ onwe m n'oge okpomọkụ niile ka m wee nwee ike maka oge ahụ, kwuru na agadi Swansea midfielder.
'Ana m ebu ibu mgbe niile ma e jiri ya tụnyere ndị egwuregwu ndị ọzọ mana m na -agbasi mbọ ike na oge ọkọchị a.
'Enwekwara m onye osi nri na -abịa ịnọnyere ezinụlọ m ka o sie anyị nri, yabụ m lere anya na -ekpuchi ntọala niile.'
Jonjo Shelvey Ndụ Ezinụlọ:
Jonjo si n'otu nzụlite ezinụlọ nke nna ya, Ricky na-arụ ọrụ tupu akwụghachi ego itinye ego n'egwuregwu bọọlụ.
Papa m, nke a sere n'okpuru, ka na -ebi n'otu agbata obi nke ọ zụlitere ụmụ ya nwoke abụọ na nwa ya nwanyị.
Banyere Jonjo Shelvey Nne na nwanne:
Mama Jonjo na nwanne m nwanyị bi na Brentwood. N'adịghị ka di ya Ricky, site n'enyemaka nke nwa nwoke na -agba bọọlụ (Jonjo), Donny kpọpụrụ nwa ya nwanyị na Harold Hill mgbe ọ hụsịrị na ọ nwere afọ ime achọghị.
Dị ka Jonjo Shelvey si etinye ya; "Nwanne m nwanyị dị ime, achọghịkwa m ka nwa ya tolite n'otu ebe m toro, yabụ azụrụ m ya na mama m ụlọ ọzọ." N'okpuru bụ foto nke Donna Shelvey na nwa nwa ya.
Ọ dị mkpa ịchọta na Jonjo Shelvey nwere nne nne Scottish.
Banyere Jonjo Shelvey Nwanna:
Jonjo nwere nwanne nwoke meworo okenye nke aha ya bụ George Shelvey bụ onye na-aṅụ mmanya ma na-egwu egwu.
Jonjo Shelvey mụtara site na mmejọ nke nwanne ya nwoke bụ George onye bụbu nwanne nwoke nwere nkà. Ọ na-achụ àjà iji nyere aka n'ịgba bọl.
"George dị mma karịa m mana ọ gbadara n'ụzọ ụmụ agbọghọ, ụlọ oriri na ọ nightụ nightụ na mmanya,"
Shelvey kwuru. “Ọ gaara adịrị m mfe ịga n'ụzọ ahụ mana enwere m agụụ ịrara onwe m nye.
Ndị enyi m ga -apụ apụ, m wee nọrọ n'ime ụlọ na -ekiri DVD of Steven Gerrard. Enwere m yaew ọ bụrụ na m debere isi m na m nwere ike ịme ihe na ndụ m nke mechara mechaa ”.
Jonjo Shelvey Untold Biography Eziokwu - Sir Alex Ferguson chere na ya nwere bọọlụ:
Shelvey ama ama ọnụ n'ọnụ onye bụbu onye isi otu Manchester United Sir Alex Ferguson mgbe enyechara ya iwu ịzọ ụkwụ na egwuregwu dị n'etiti Liverpool na Red Devils.
N'oge ahụ, ọ boro onye nwe ụlọ ezumike nká na United 'ahịhịa' ya. N'ịjụ ịrịọ mgbaghara Shelvey, onye England na-eme nke ọma n'oge niile kwuru, sị: "Enweghị m mmasị. Ọ na-egosi na ị nwere bọọlụ dị iche iche gbasara gị. "
Jonjo Shelvey Eziokwu nke Onwe:
Ike nke Jonjo: Ọ nwere obi ọmịiko, nkà, enweghi nghọta, dị nwayọọ, maara ihe na egwu.
Adịghị Ike Jonjo: Ọ nwere ike ịtụ egwu, tụkwasị ntụkwasị obi obi, mwute ma nwee ọchịchọ ịhapụ eziokwu.
Ihe Jonjo nwere mmasị: Ọ hụrụ ịnọ naanị ya, ụra, egwu, mmekọrịta ịhụnanya, mgbasa ozi nke ọma, igwu mmiri, isiokwu ime mmụọ.
Ihe Jonjo achọghị: Mara ya nile, ebe a na-akatọ ya, oge gara aga na-alọghachi na-ezute ya na obi ọjọọ nke ụdị ọ bụla.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Jonjo Shelvey Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.